Dacwad ka dhan ah Saadaq John oo loo gudbiyey UN-ka iyo CC Shakuur oo ka xog-waramay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Dacwad ka dhan ah Saadaq John oo loo gudbiyey UN-ka iyo CC...
Dacwad ka dhan ah Saadaq John oo loo gudbiyey UN-ka iyo CC Shakuur oo ka xog-waramay
Siyaasigadda Cabdiraxmaan Cabdirashakuur Warsame ayaa ku dhawaaqay in dacwad ka dhan ah Saadaq John, taliyaha booliska gobolka Banaadir, loo gudbbiyey Jamciyadda Qurumaha Ka Dhaxeysa.
Qoraalkan hoose ee 10-ka bog ah waxaa qoray qareen Mareykan ah oo ay xukuumadda Soomaaliyeed u qabatay in danbiyada loo haysto laga beri yeelo Saadaq Cumar Maxamed oo loo yaqaan Saadaq Joon.
Jeremy W. Schulman oo horay qareen ugu ahaa Xasan Cali Khayre markii lagu soo eedeyey in uu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab ayay dowladda Soomaaliya muddo sannad ka hor ah u kiraysay, qasnada Qaranka u furtay in Schulman qareen u noqdo Saadaq Joon, iyadoo uu qarashka qareenku ilaa iyo haatan boqolaal kun sii marayo.
Waxaa kaloo cadaadis lagu saaray saraakiil xil ka haysa dowladda ama ka soo hayn jirtay in ay ka marqaati kacaan in Saadaq Joon ka eed la’yahay danbiyada loo haysto.
Waxaa saraakiishaas ka mid ah Sarreeye Guuto Saaciid Axmed Kediye oo hataan madax ka ah Hoggaanka Danbi Baarista ee Ciidanka Booliska (CID), Xuseen Cismaan Xuseen iyo Cabdullaahi Maxamed Cali “Sanbaloolshe” oo labaduba soo noqday agaasimaha hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliyeed ee (NISA).
Saadaq Joon ayaa danbiyadiisa loo gudbiyey guddiga cunaqabataynta Qaramada Midoobay ee qaabilsan shakhsiyaadka xasilooni darida ku haya Soomaaliya, xiriirkana la leh argagixisada.
Saadaq Joon ayaa loo haysataa danbiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin weerarkii uu ku soo qaaday xarunta Xisbiga Wadajir ee uu ku dilay 5-ruux, kaddibna kabahooda ku aasay, dilal qorshaysan oo uu muwaadiniin Soomaaliyeed u gaystay, ka macaashka hub sharci daro lagu iibiyey iyo xiriir kala dhexeeya Al-shabaab.
Qoraalka qareenka ayaa ah mid caato ah, kana aradan xujooyin, marka laga reebo marqaatiyada ay fureen saraakiisha kor ku xusan. Xisbiga Wadajir si rasmi ah ayuu qoraal ugu gudbin doonaa QM.
Waxaanse halkaan fariin uga diraynaa saraakiisha amniga, kuwa marqaaatiga furay, madaxda xukuumadda, warbaahinta iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa.
1. Dhalinyarada ka tirsan hay’adaha iyo laamaha amniga ku cibra qaata Saadaq Joon, ogaadaana fal kasta oo dastuurka dalka iyo xayndaabka sharciga ka baxsan in uu yahay danbi qoorta kuu suran oo aan marna ka haraynin, mustaqbalkaadana iyo meel kasta oo aad dunida ka tagtana ku hor yaala. Saadaq Joon maanta ma haysto qoraal sharci ah ama amar qoran oo kuwii soo diray ka hayo oo uu isku furan karo. Amar kasta oo la idin siiyo waa in uu sharci ku qotomaa, cida soo bixisayna qoraal idinku siisaa.
2. Saraakiisha shahaado suurka iyo marqaati beenaadka u furtay si loo beri yeelo Saadaq Joon waa mid u diiwan gashan. Waxba u terimayso Joon, shacabka Soomaaliyeedna wuu ogaaday wixii aad moodeen in ay qarsoonaan doonaan. Weli fursad ayaa idiin furan aad mowqifkiina ku caddayn kartaan, haddii la idinka been abuurtay ama la idin cadaadiyey intaba.
3. Madaxda dowladda waa in ay ogaadaan in danbiga uusan ku ekaan doonin wiilashii ay ku shaqeysteen ee ay danbiyada geliyeen ee
maalintooda ay iman doonto. Waxaan ognahay in madaxweyne Farmaajo uu Sadaq Joon ku daray wafdigiisii Qaramada Midoobay si loo horgeeyo Guddiga Cunaqabataynta Qaramada Midoobay loona beri yeelo, waxaan ognahay in Ra’iisul Wasaare Khayre uu soo qabtay qareenka, qasnada dowladda na u furay qarash kasta oo ku baxa difaaca Joon. Laba wajiilanimo ka weyn miyaa jirta in Cabdirashiid Janan maxkamad ayaan saaraynaa la yiraahdo Saadaq Joon waa qarash iyo qareen ayaan difaaciisa ku bixinaynaa?
4. Warbaahinta Soomaaliyeed waa in ay soo bandhigaan xaqiiqda dhabta ah, lana wadaagaan bulshada Soomaaliyeed xogta ku xeeran dacwadan ilaa Qaramada Midoobay is daba taal.
5. Hay’adaha xuquuqda insaanka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaan ku dhiiragelinaynaa in ay kaalintooda ka qaataan dabagalka danbiilayaasha, nagalana shaqeeyaan in caddaaladdu guulaysato, ilaalinta xuquuqda bani’aadamkana ay tahay waxa ugu weyn ee dowladnimada loo dhisay.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dowladda Federaalka
Next articleWasiir ka qeybgalaya shir looga hadlayo arrimo lagu eedeeyo Villa Soomaaliya [Daawo]
“Dowladda hoose ee Xamar waxa ay bulaacado ka dhigtay Xerada Ciidanka Cirka” Dable Baylood.+Vedio
Baarlamaanka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo Kulan deg deg ah la iskugu yeeray
Haweeney 74 jir mataano ku dhashay Hindiya oo xaalad miyir dabool ah ku jirta+Sawirro
Iska horimaad caawa ka dhacay Magaalada Garowe & faahfaahino ka soo baxaya
Xasan Sheekh kulan isugu yeeray Xildhibaannada iyo Siyaasiyiinta Beeshiisa (Maxaa Cusub?)